“ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်ကြကုန်သော မိဘ ပြည်သူများခင်ဗျား. . . ယခုကာလသည်. . .
ညစဉ်ညတိုင်းကြားခဲ့ရသည့် ထိုအသံသည် ရံဖန်ရံခါမှသာ ကြားရတော့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် သုံးလ၊ တိတိကျကျဆိုရလျှင် မတ် လ ၂၃ ရက်နေ့၊ ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၌ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦး စတင်တွေ့ရှိထားကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အား ကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်ပြန်နှင့် အမေရိကပြန် မြန်မာနိုင်ငံ သားနှစ်ဦးတွင် COVID-19 စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မှုကို အစပြုကာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယင်းသို့တွေ့ရှိမှုနှင့်အတူ အများပြည်သူသည်လည်း အသိစိတ်များဖြင့် လှုပ်ရှားသွားလာရင်း အစိုးရ၏ အချိန်နှင့်အမျှ ထုတ်ပြန်မှုများကို လိုက်နာခဲ့သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
မတ်လအကုန် ဧပြီတွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၌ ပြုလုပ်သည့် လူထုတွေ့ဆုံမှုကို အရင်းပြုကာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများ တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဧပြီလအတွင်း အကြောင်းမရှိဘဲ အပြင်ထွက် သွားလာခြင်းမပြုရန်နှင့် ညဘက်တွင် ၁၀ နာရီကျော် လွန်၍ အပြင်ထွက်ခွင့်မပြုခြင်းတို့ကြောင့် ရန်ကုန်၏ လမ်းမများသာမက ရပ်ကွက်များအတွင်းတွင်ပါ အသွားအလာနည်း၍ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြင့်ပင် နေခဲ့ကြသည့်ကာလဖြစ်သည်။
“သင်္ကြန်မှာ လူတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ သင်္ကြန်အပြီးမှာ မထွက်ရင် ငတ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်လာကြတယ်” ဟု COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ဦးထိပ်တင်အောင်က ဆိုသည်။
လူတစ်ဦးမှတစ်ဦး ကူးစက်မှုနှင့် ရောဂါကူးစက်ခံရသူအချို့ သေဆုံးခဲ့ရသဖြင့် အများပြည်သူများအကြား ရောဂါကိုကာကွယ်ရန် နှာခေါင်းစည်းနှင့် လက်သန့်စင်ဆေးရည်များ အသုံးပြုမှုများလာပြီး ဈေးကွက်တွင် ပစ္စည်းပြတ်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဖက်တွင်လည်း COVID-19 ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုသွက်လက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီသစ်ကို မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကော်မတီကို ဒုတိယသမ္မတ ၁ ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဖွဲ့ဝင်များတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) စသည့် ဝန်ကြီးများနှင့် အကြီးတန်း တာဝန်ရှိသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီသည် အရေးယူမှုများ၊ သတင်းမှားများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖြန့်ဝေနေခြင်းများ၊ အသွား အလာ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းကို မလိုက်နာခြင်းများ တို့ကို ကူးစက်ရောဂါဥပဒေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေတို့ဖြင့် အရေးယူမှုများကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မတ်လအကုန်က The Voice Daily သတင်းစာက မေးမြန်းမှုကို ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး ဖြေကြားထားချက်အရ သိရသည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေဖြင့် မန္တလေးနှင့် နယ်မြို့များအပါအဝင် ရန်ကုန် မြို့တွင်ပါ ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာကို တရား စွဲဆိုမှုများရှိခဲ့သော်လည်း လူစုလူဝေးဖြစ်စေသည့် ပွဲကျင်းပရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမူ တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူလူထုအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဖြစ် ပေါ်ခဲ့ရသည်။
ဇွန်လ ၂၃ ရက်တွင် သုံးလပြည့်ပြီဖြစ်သည့် COVID-19 သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူများ အတွက်တော့ စိုးရိမ်မှုက ထက်ဝက်မကကျ၍နေ သည်။
“ရောဂါရှိတဲ့သူတွေ့ပြီး တစ်လလောက်တည်း က လူထုကပေါ့နေပြီ။ လူစုလူဝေးလည်းရှိတယ်။ ပြည်တွင်းကူးစက်သူ မရှိဘူးဆိုပြီး နှာခေါင်းစည်း လည်းတပ်တယ်။ ထွက်လည်းထွက်တယ် (နေအိမ် ပြင်ပ)” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း ညှိနှိုင်း ရေးမှူး (အသင်းဝင်) ဦးရဲမင်းက ပြောဆိုသည်။
ကြက်ခြေနီအနေနှင့် အများပြည်သူအကြား လူမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စဉ် တွေ့ရှိမှုများကို သုံးသပ်မှုများအရ လူထုသည် လိုက်နာရမည့် ကျန်း မာရေးညွှန်ကြားချက်အချို့ကို လိုက်နာကြသလို ချိုး ဖောက်သည်များကိုလည်း ချိုးဖောက်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကသုံးသပ်ပြောကြားသည်။
“လက်ဆေးတယ်။ ခပ်ခွာခွာနေဆိုနေကြ တယ်။ မြို့ထဲလည်းသွားတယ်။ စားသောက်ဆိုင်လည်း ထိုင်တယ်။ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတော့ ပြန်ဖြစ်နေပြီ” ဟု ၎င်း၏ အမြင်ကိုဆိုသည်။
ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပြန်လည်အသက်ဝင် လာသည့် ပြည်သူများအတွက် COVID-19 နှင့် အတူ အသားတကျနေထိုင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေထိုင် သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ပေါ့လျော့မှုများ၊ ဟာကွက် များကတော့ရှိသည်။
ယင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သည် COVID-19 ပြည် တွင်းကူးစက်မှု လူထုများအကြားဖြစ်ခဲ့လျှင် ရန်ကုန် က အန္တရာယ်အများဆုံးဟု ဦးထိပ်တင်အောင်က သုံးသပ်သည်။
ဇွန်လအတွင်း ရန်ကုန်၊ ပြည်၊ မန္တလေး၊ တောင်တွင်းကြီး၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် စသဖြင့် ကားစီးလုံးငှားကာ ခရီးနှင်ခဲ့စဉ်တွင် တောင်တွင်း ကြီးမှ နေပြည်တော်အသွားတွင် တောင်တွင်းကြီးရှိ ဂိတ်တစ်ခုတွင်သာ တာဝန်ကျသူက နှာခေါင်းစည်း စနစ်တကျဝတ်ဆင်ရန် သတိပေးမှုကို ကြုံခဲ့ရသည်ဟု ဦးထိပ်တင်အောင်က ဆိုသည်။
မန္တလေးသို့အဝင်တွင်လည်း မြို့တွင်းရှိ ထိုးမုန့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ လိပ်စာကိုပြောကာ အဒေါ်အိမ်သွားမည်ဟု ပြောခဲ့သော်လည်း သွားလာခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ၎င်းကပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။
COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိလျှင် ပိုးတွေ့ရှိသူနှင့် ဆက်စပ်သူများကို နောက်ကြောင်းစစ်ဆေးမှုများ၊ အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ တံခါးမရှိ၊ ဓားမရှိ မြို့အသီးသီးသို့ သွားလာနေမှုအတွက် မည်သည့်ရက်က မည်သည့်အရပ်သို့ သွားခဲ့သည်ကို မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများမရှိလျှင် ပြည်တွင်းကူးစက်မှု အများ အပြားရုတ်တရတ်တွေ့ရှိခဲ့သော် မည်သို့နောက်ကြောင်းလိုက်ကြမည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ရောဂါပိုးစတင်တွေ့ရှိသည်မှာ လက်ရှိအချိန်အထိ ထိရောက်စွာအရေးယူမှု တိတိပပ ပြုလုပ်သင့်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် နှာခေါင်းစည်းမတပ်သူများကို ဒဏ်ရိုက်ခြင်း၊ မြို့နယ်အချို့တွင် နှာခေါင်းစည်းမတပ်သူများကို ပညာပေးခြင်း၊ နှာခေါင်း စည်းအခမဲ့ဝေခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သုံးလအကြာ ကိုဗစ်ခရီးက အသက်ရှင်ရေး ထက် ဝမ်းရေးက အဓိကဖြစ်၍နေသည်။
ထမင်းသာစားလိုသည် ဟင်းမပါလည်း ဂရု မစိုက်ဆိုသလို အလုပ်လုပ်ကိုင်ရေးသာ အဓိကကျ သည် COVID-19 ကူးမှာလည်း မကြောက်ကြတော့ပေ။
“ပြည်သူလူထုကတော့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု နည်းသွားတယ်။ အန္တရာယ်ရှိလားဆိုရင် ပြောရခက်တယ်။ စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံခြားပြန်တွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ရင် ကူးစက်နိုင်တယ်”
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးလတာအတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၂၉၀ ဦးကျော်နှင့် သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိခဲ့ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ကောင်းမွန်မှုထိန်းချုပ်ကုသမှုရှိခြင်းကြောင့် အဖိတ်အစဉ်နည်း သည်ဟု ဒေါက်တာကျော်စွာဦးက သုံးသပ်ထားသည်။
COVID-19 ရောဂါသည် ပြည်တွင်းတွင် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများကို ထိန်းချုပ်ကုသနိုင်နေပြီဆို သော်လည်း COVID-19 နှင့် ပြည်သူလူထုသည် လှေပြိုင်ပွဲပမာ ငါတို့အနိုင်ရပြီဟေ့ဟုဆိုကာ လှေကို ဆက်မလှော်ဘဲ တက်မထောင်ခြင်းပြုလိုက်လျှင် COVID-19 က အနီးကပ်မှ အသာရသွားနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်ကြောင်း ဒေါက်တာကျော်စွာဦးက သတိပေးစကားဆိုသည်။
“သိပ်ပြီးစိတ်ပူစရာ အများကြီးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တက်မထောင်လို့တော့ မရသေးဘူး”